Skores - တိုက်ရိုက်ဘောလုံးရမှတ် | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Skores - တိုက်ရိုက်ဘောလုံးရမှတ်
Skores - တိုက်ရိုက်ဘောလုံးရမှတ် APK ကို
★★★★★ Discover SKORES အသက်ရှင်ရမှတ်များအတိုင်းလိုက်နာရန်လွယ်ကူနှင့်အတူပါဆုံးပြီးပြည့်စုံအားကစား app ကို! ★★★★★နယူးအမည်, နယူးအိုင်ကွန်, နယူးက App, ဒါပေမယ့်နေဆဲသင်အကြိုက်ဆုံးအားကစားနောက်လိုက်ဖို့အရာနှင့်အတူအကောင်းဆုံးတိုက်ရိုက်ရမှတ် APP!
အခုတော့သုံးခြင်္သေ့ကိုထောကျပံ့, Copa America နှင့် EURO 2016 နထေိုငျနထေိုငျ!
လူအပေါင်းတို့သည်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရမှတ် Follow နှင့်အဖွဲ့များနှင့်သင့်ရွေးချယ်မှုဂိမ်းရမှတ်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအပေါ်စိတ်ကြိုက်သတိပေးချက်များလက်ခံရရှိသည်။
9 SPORTS တိုက်ရိုက်
တစ်အားကစားအခိုက်လက်လွတ်ဘယ်တော့မှ: တိုက်ရိုက်ဘောလုံး (ချန်ပီယံလိဂ်, Europa လိဂ်, Liga, စီးရီးအေ, လီဂူး 1, ကမ္ဘာ့ခွက်ကို ... ။ ), တင်းနစ်, ဘတ်စကက်ဘော, ရပ်ဘီ, ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ, ဘေ့စ်ဘော, လက်ပစ်ဘောလုံး, ဘောလီဘော, နှင့်ဟော်ကီ။
+ ကျြော 5000 ယှဉ်ပြိုင်
အသက်ရှင်သောဘောလုံးများအတွက်အမေရိကန်နှင့်နိုင်ငံတကာလိဂ် (Liga, စီးရီးအေ, Europa လိဂ်, လီဂူး 1, ကမ္ဘာ့ဖလားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှချန်ပီယံလိဂ်), ရပ်ဂ်ဘီ, လက်ပစ်ဘောလုံး, ဘော်လီဘော, တင်းနစ်, ဘတ်စကက်ဘော, ဘောလုံး, ဘေ့စ်ဘောနှင့်ဟော်ကီကိုရှာပါ!
သင့်မိုဘိုင်းပေါ်မှာရှိသမျှအားကစားဘို့ကို real-time အပေါင်းတို့၌ရမှတ် Follow နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးအသင်းများ၏ရလဒ်များကိုလက်လွတ်မကြဘူး!
SKORES «အခြားပျေါလှငျ - တိုက်ရိုက်ဘောလုံးရမှတ်ပေါင်း 8 သည်အခြားအားကစား "နေသောခေါင်းစဉ်:
- တခြား livescore app များကိုနှိုင်းယှဉ်မရရှိနိုင်ပါပြီးအလျင်မြန်ဆုံး Livescore ဝန်ဆောင်မှု
- Real-time အတွက်တိုက်ရိုက်ဘောလုံးရမှတ်ပေါင်း 8 သည်အခြားအားကစားအတိုင်းလိုက်နာရန်
- ပွဲစဉ်တွေကို Summaries
ကျွန်ုပ်တို့၏ livescore9တိုက်ရိုက်အားကစားနှင့် 5000 ပြိုင်ပွဲချန်ပီယံလိဂ်, ယူရိုပါလိဂ်နှင့်လာလီဂါပါဝင်သည်ထက်ပိုမိုဖုံးလွှမ်း!
ဘောလုံးနှင့်လည်းတင်းနစ်, ဘတ်စကက်ဘော, ဘော်လီဘော, ရပ်ဘီ, ဘေ့စ်ဘော, လက်ပစ်ဘောလုံး, ဟော်ကီနှင့်ဘောလုံးနေထိုင်ကြသည်။
ဘောလုံးပရိတ်သတ်ကျွန်တော်တို့ကိုထွက်စမ်းသပ်အသက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောလုံး livescore ဝန်ဆောင်မှုသင်လိုအပ်သမျှကိုရှိပါတယ်! ကျွန်ုပ်တို့၏ App ကို iPhone အတွက်က Windows Phone များနှင့် SKORES များအတွက် sporty Trader applications များ (SportyTrader) ကနေကျော်ကြားတဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရမှတ်ဝန်ဆောင်မှုနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက် ScoresApp ၏အခြားအင်္ဂါရပ်များ:
- LIVESCORE: Real-time အတွက်ရမှတ်
- ရမှတ်များ: တိုင်းပွဲစဉ်များအတွက်အားလုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရလဒ်များကို
- Alert: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ livescore ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူရမှတ်ပြောင်းလဲမှုများများအတွက်အသိပေးချက်များ
ဘောလုံး, ဘတ်စကက်ဘော, တင်းနစ်, ဘောလီဘော, လက်ပစ်ဘောလုံး, ရပ်ဘီ, ဟော်ကီ, ဘေ့စဘော & ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပြိုင်ပွဲများအတွက်အဆင့်နှင့်လိဂ်စားပွဲ: - ရာထူး
- Scheduler: ဘောလုံး, ဘတ်စကက်ဘော, တင်းနစ်, ဘောလီဘော, လက်ပစ်ဘောလုံး, ရပ်ဘီ, ဟော်ကီ, ဘေ့စဘော & ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများအတွက်ရရှိနိုင်ပွဲစဉ်အချိန်ဇယား။
- SUMMARY: တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပွဲစဉ်မှတ်ချက်အအနှစ်ချုပ်
- ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ: သင်၏အကြိုက်ဆုံးအသင်းများနှင့်ကစားသမား stats Analyze နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်
- အကြိုက်ဆုံး: သင်၏ရွေးချယ်မှု၏အသင်းများနှင့်ကစားသမားအဘို့သင့်သတိပေးချက်များ Customize
SKORES က၎င်း၏ app ကိုများအတွက် SportyTrader ကရွေးချယ်သစ်ကိုနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင် Fast နှင့်တိကျစွာအခမဲ့တိုက်ရိုက်ရမှတ်ဝန်ဆောင်မှုရှာဖွေတွေ့ရှိ, ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ကြိုးစားပါ
- မြန်နှုန်း optimization
ကျွန်တော်တို့ကို SKORES တိုးတက်စေရန်နှင့်တိုက်ရိုက်ရမှတ်များအတိုင်းလိုက်နာရန် app ကိုသုံးစွဲဖို့အမြန်ဆုံးလွယ်ကူစေရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Skores - တိုက်ရိုက်ဘောလုံးရမှတ်
21.85 ကို MB